Kismaayo News » Cirro oo aqbalay guusha Muuse Biixi
Cirro oo aqbalay guusha Muuse Biixi
Kn: Cabdiraxmaan Cirro ayaa goordhawayd shaaciyay inuu aqbalay natiijadii ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka Somaliland asagoo xeerinaya nabadda, xasiloonida iyo wadajirka shacabka Somaliland.
Cirro ayaa sheegay in wax kasta oo uu tabanayay uu uga tanaasulay danta guud iyo wadanoolaanshaha, si looga baaqsado qalalaase siyaasadeed iyo dhibaatooyin horseedi kara barakac iyo dhimasho aan loo baahnayn. “dalkayga u burburin mayo damacayga” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro oo taageerayaashiisa hoga tusaalaynayay inay dantu ku qasabtay inuu dalku burburo oo uu tanaasuliwaayo iyo dalku sii dhisnaado oo uu tanaasulo dulmi kasta oo lagula kacayba, sidaas darteedna uu doortay inuu tanaasulo oo dalku sii dhisnaado.
Go’aanka Cirro uu ku aqbalay natiijada ayaa waxaa soo dhaweeyay guud ahaan Soomaalida caqligeedu fayowyahay, waxayna Cirro u arkaan halyay maadaama uu qaatay go’aan geesinimo, wadaninimo iyo mid dad iyo dal jacayl ku dheehanyahay.
Aqbalaadda Cirro, waxay meesha ka saaraysaa baahitaanka rabshado ay horboodayaan dhalinyaro xamaasadaysan iyo waliba in madaxweynaha la doortayi aysan wakhti kaga lumin is jiid-jiid ee horay uu ka hawlgalo.